Home › News› बिजिडब्लुएस मिनिष्टर हेलेन जोन्ससँग छलफल
By: प्रकाश गुरुङ
अल्डरसट । ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाईटी (बिजिडब्लुएस) यूकेको टोली र स्याडो लोकल गोभरमेन्ट मिनष्टर हेलेन जोन्सबीच गत बुधबार २० मार्चका दिन अल्डरसटस्थित प्रिन्सेस हल, रिचवोर्न सुईटमा स्थानीय विषयमा छलफल भयो ।
रसमुर बरो काउन्सिल लेबर पार्टीको काउन्सिलरहरुको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । रसमुर क्षेत्रमा नेपालीहरुको बस्ती बाक्लो छ । विगतमा स्थानीय र नेपालीबीच तनाव बढेको स्थिति थियो । काउन्सिलर लेस टेलरले मन्त्री जोन्ससँग परिचय गर्दै भने “मेजर (रि) टिकेन्द्र दल देवान ग्रेटर रसमुर नेपाली कम्युनिटीका अध्यक्ष हुन् र उनीहरुले यस क्षेत्रमा भएका तनावलाई सुल्झाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । देवान बोले, “रसमुर क्षेत्रमा ठूलै समस्या भएको थियो । युवाहरुबाट नै फेसबुक क्याम्पेन सुरुआत भयो । एकापासमा भनाभनका प्रसङ्ग चले तर आखिर ती समूहलाई नै भेटेर छलफल गरेपछि त्यसको निष्कर्ष रामरो भएको छ । स्थानीय युवक र नेपाली युवकहरुबीच यूनाईटेड रसमुर फुटबल क्लब “जोस र जाँगर”का साथ खडा भएको छ र अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै कल्चरल प्रोग्रामहरु, वृद्धवृद्धाहरुलाई अंग्रेजी भाषा कक्षा, बेलायतमा जन्मे हुर्केका नेपाली नानीहरुलाई नेपाली कक्षा, रेडियो lबजिडब्लुएसमार्फत् जानकारी कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्” ।
हेलेनले सोधिन, “मेजर यदि हाम्रो सरकार पावरमा आयो र तपाइं दुईवटा मात्र कुरा माग्न पाउनुभयो भने ती के–के हुन् सक्छन् ? देवानले हाँस्दै भने, “अवश्य पनि समान पेन्सन एक नम्बरमा पर्दछ ।” छेवैमा भएका काउन्सलर व्यारी जोन्सले बीचैमा बोले, यस्ले त स्थानीय समस्या हल हुदैन नि ? जवाफमा केही हदसम्म हुन्छ, भने । भूपू गोर्खाहरु त जसका पेन्सन छैनन् ती सबै बेनेफिटमा आकर्षित भएर यूके आएका छन् । र, पेन्सन दिएकालाई पनि नोकरी अनुसार समानरुपमा दिएका छैनन् । त्यही भएर नचाहेर पनि हामीले मुद्दा लड्नुप-यो । स्मरण रहोस्, समान पेन्सनको मुद्दा हाल युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राईटस्, फ्रान्समा पुगेको छ र कोर्टले ब्रिटिस सरकारलाई २० मे २०१३ भित्र जवाफ मागेको छ । कार्यक्रममा रसमुर वरो काउन्सिलका कर्मचारीहरुले हेलेनलाई स्थानीय वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । लेवर पार्टीका काउन्सिलरहरु लेस टेलर, ल्कयाइब ग्राथन, फ्रायड्ड रष्ट, किथ डिबल, ब्यारी जोन्स, शु डिबल, टेरी ब्रिजमेन, डोन क्यापलमेन, माईक रोबर्टश र बिजिडब्लुएसका पीआर प्रकाश गुरुङको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
रसमुरको कुल जनसंख्यामा ७ दशमलप ४ प्रतिशत नेपाली पर्दछन् भने तीमध्ये ६ दशमलव २ प्रतिशत नेपाली पहिलो भाषाका रुपमा बोल्दछन् । जनसंख्या बृद्धिकै कारण राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको यस क्षेत्रमा ध्यानार्षण भइरहेको देखिन्छ । रसमुरमा कन्जरभेटिभ पार्टीको बलियो पकड छ । ३९ जना काउन्सिलरमध्ये २५ जना कन्जरभेटिभ पार्टी, ११ जना लेबर र तीन जना यूके आइपीका छन् ।